Pendant Ndi ebighi ebi site n’aka Olga Yatskaer, onye okacha amara ama ama kpebiri na ya ga acho oru ohuru nke ndi ji acho ihe eji achọ mma. Wouldfọdụ ga-ahụ ya ihe emetụtara nke ọla aka Celtic ma ọ bụ ọbụna eriri Herakles. Mpempe ahụ na-anọchite otu ọdịdị na-enweghị ngwụcha, nke yiri agba abụọ jikọtara ọnụ. Emepụtara nsonaazụ a site na akara ndị yiri gram dị n'elu ibe. N’aka ozo - ejikọtara ejikọ ha abụọ dika otu, na otu bu njikọko nke abuo.
Nchịkọta Ọla Na ijikọ ya na ejiji na teknụzụ dị elu, oru ngo a bụ imepụta iberibe ọla nke nwere ike ime ka ihe ndị Gothic ochie wee bụrụ nke ọhụụ, na-ekwu maka ikike nke ọdịnala na ọnọdụ dị n'oge a. N'inwe mmasị n'ụzọ otu Gothic si enwe mmetụta n'ahụ ndị na-ege ntị, ihe omume ahụ na-anwa ịkpasu ahụmịhe mmadụ pụrụ iche site na mkparịta ụka egwuregwu, na-achọpụta mmekọrịta dị n'etiti imewe na ndị na-ebu ya. A na-egbute nkume gemstones, dị ka ihe dị ala nke ihe ala, ka etinyere na mbara ala na-enweghị atụ iji tụnye ụcha ha na akpụkpọ ahụ iji mee ka mmekọrịta ahụ dịkwuo elu.
Kọlụm A na-eji ngwa agha Iv dị narị carat dị narị asaa na ọla ọcha. O nwere dayameta 110 (20.2ct) ma mejupụtara ngalaba 62. Ha niile nwere ihu abụọ dị iche iche: N'akụkụ akụkụ, a na-enwe apụl apụl, n'ihe ndị dị elu, enwere ike ịhụ ahịrị V-ahịrị. A na-ekewa akụkụ nke ọ bụla iji mepụta nsị oge opupu ihe ubi na-ejide ola diamond - olajị ahụ na-ejide ya. Nke a na-emesi ike na -anwụ, na-egbukepụ ma na-eme ka mbara igwe na-ahụ anya dị mma. Ọ na-enye ohere ihie dị oke ma doo anya, n’agbanyeghi oke olu.
Mgbanaka Mgbe Tappy na-eleta otu ogige dị elu na nrọ ya, nrọ ya nwere Roses gbara ya gburugburu. N’ebe ahụ, o lebara anya n’ime olulu mmiri ahụ ma hụ nro nke kpakpando abalị, ma mee ihe ọchichị. Egosiputa nke kpakpando nile n’abali, ya na ruby na-egosi oke mmasi ya, nrọ ya, na olile anya o mere na ochicho. Ihe ngosi nka bu udiri ejiji rose, hexagon ruby claw nke edobere na 14K gold. A na-apị obere akwụkwọ iji gosipụta ụdị ahịhịa. Mgbaaka mgbanaka na-akwado elu dị larịị, wee na-abanye n'ime obere nwa. Ekwesịrị ịkọwa nha ụdaolu.
Akpa Tote Topographic sitere n'ike mmụọ nsọ akpa Tote, iji rụọ ọrụ dị ka obere ngwa ngwa, karịchaa n'ụbọchị ndị ahụ jupụtara ọrụ jiri oge ịzụ ahịa ma ọ bụ ije ozi. Ikike akpa Tote dị ka ugwu ma nwee ike ijide ma ọ bụ buru ọtụtụ ihe. Ọkpụkpụ arụ dị larịị bụ mkpụmkpụ akpa ahụ, ihe ngosipụta ọdịdị ala ga-abụ ihe dị elu dị ka ugwu enweghị oke.
Pendant Taq Kasra, nke pụtara kasra arch, bụ memento nke alaeze Sasani nke dị na Iraq ugbu a. Nke a pendant sitere na geometry nke Taq kasra na ịdị ukwuu nke ọbụbụeze ndị bụbu nke dị na nhazi ha na usoro ha, ejirila ya na usoro ụlọ ọrụ a iji mepụta ethos a. Dị kachasị mkpa bụ ụdị ọgbara ọhụụ nke mere ya mpempe nwere echiche dị iche ka ya wee nwee ike ịlele akụkụ ahụ ọ na-adị ka ọwara wee weta echiche dị n'ihu ma mepụta ele anya n'ihu ọ megoro oghere.
Pendant Nchịkọta Ọla Kọlụm Mgbanaka Akpa Tote Pendant